August | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya August 31, 2017	Leave a comment 233 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Bai Yan, qalbi-jilcane ku nool Hangzhou ayaa dhawaantan soo jiitay indhaha bulshada caalamka kadib markii la ogaaday in 7 sano ee lasoo dhaafay uu lacag dhan $150,000 ku bixiyay daryeelka iyo xanaanaynta Eeyaha howl-gabka noqday halkaas oo kuwii lasoo shaqeeyey ay helayaan baxnaano. 55 sano jirkan ayaa booliska kamid noqday sanadkii 2004 isaga oo 30 ku dhawaad tababbaray. Wuxuu ...
Zakariya August 31, 2017	Leave a comment 347 Views
Muqdisho – Wiil yar ayaa naftiisa baray in dheeshu mararka qaar ay dhimashada u dhowdahay kadib markii muddo saacado ah uu ku dhex xirmay qasaaladda dharka lagu dhaqdo, marka loo eego booliska dalka Ukraine. Booliska Kharkiv ayaa sheegay in loogu yeeray guriga wiilkan 7 sano jirka ah kagadaal markii uu awoodi waayay inuu kasoo baxo mashiinta lagu meyro dharka. Wiilka ...
Zakariya August 29, 2017	Leave a comment 314 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Gamaanku wuxuu had iyo jeer ahaa qeyb kamid ah nolosha insaanka – u eegis la’aan waqtiga iyo casriga lagu jiro. Wuxuu lahaa qeyb weyn oo noloshu la’aantiis aysan suura-gal noqoteen. Hayeeshe qarniyadii danbe oo adeegsiga gaadiidka afar-lugoodka uu soo kordhay, ku tiirsanaanta Gamaanka aad bay hoos ugu dhacday. Balse taasi kama horjoogsan in geesta kale looga faa’iideysto. ...
Zakariya August 29, 2017	Leave a comment 441 Views
Alaska (Himilonews) – Gorgorku waa shinbirta qaran ee dalka Maraykanka, hayeeshe badi dadka Ameerikanka ah aad bay ugu adag tahay inay arkaan inta ay nool yihiin, marka laga reebo kuwa ku nool magaalada Unalaska halkaas oo ay aad ugu badan yihiin. Unalaska waxay guri u tahay dad ku dhow 4,700 kuwaas oo deegaankooda ay la qeybsadaan shinbiraha kan ugu xoogga ...
Zakariya August 28, 2017	Leave a comment 360 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xaflad kooban oo lagu soo xirayay tababbar soconayay muddo saddex maalmood ah ayaa lagu qabtay hoolka Idaacadda Himilo. Tababbarkan oo wariyaasha Idaacadda Himilo lagu barayay diyaarinta iyo sameynta Radio Documentary, Radio Magazine iyo Newspaper Article waxaa bixinayay kaadirro ku gaaroobay cilmiga iyo mihnadda saxaafadda. Ustaad Faarax Cumar Nuur oo ah madaxa tababarrada Ururka NUSOJ oo inta badan ...
Zakariya August 27, 2017	Leave a comment 194 Views
Makkah (Himilonews) – Daladda ugu ballaaran adduunka oo dhismaheedu dhawaanahanba uu socday ayaa sanadkan lagu wadaa inay hoos iyo har qabow u noqoto Muslimiinta ka qeyb-galaya Xajka sanadkan, si looga yareeyo hurka iyo kuleylka cadceedda ee magaalada Barakaysan ee Makka, sida laga soo xigtay saraakiisha qaabilsan howlaha Xajka. Hoosiiskan ‘Daladda – Umbrella’, waxay dabooli doontaan fogaan isku wareeg ah oo ...
Xaafadda ugu nadiifka badan Qaaradda Aasiya.
Zakariya August 27, 2017	Leave a comment 222 Views
Muqdisho (Himilonews) – Badi magaalooyinka waaweyn ee dalka Hindiya waxay caan ku yihiin la dhinac jiifsiga qashinka iyo bulaacadaha, hayeeshe xaafadda Mawlynnong kuma jirto kuwaas. Dadka xaafaddan uma hayaan dulqaad yar aragtida qashinka waxayna waqtigooda ku bixiyaan hubsashada in mitir kasta oo xaafadda kamid ah aysan wasaq lahayn. Mawlynnong waxay markii ugu horreysay soo shaac-baxday sanadkii 2003-da, markii saxafi ka ...
Zakariya August 27, 2017	Leave a comment 308 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Xarunta Animal Ark waa goob gaar loogu xanaaneeyo duur-joogta Maharashtra ee dalka Hindiya taas oo qaabisha xayawaannada aqoontoobay lana ugaarsaday waalidiintii dhalay. Waxaa dhisay mid kamid ah dhaqaatiirta xaafadda kaas oo fahmay lagama haraanka ugaarsiga, hayeeshe aan haddana oggolaanin in ilmaha yar ay macluul iyo agoonnimo u dhintaan. Maalin, waqtigii 70-meeyada, isaga iyo afadiisa oo maraya keynta ...
Zakariya August 23, 2017	Leave a comment 283 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxa lagu yaqaan xukuumadaha is-baddal doonka ah ee hadda un kasoo kabsanaya nidaamyadii dib u dhaca ku keenay ayaa ah gaabis kaga jira hir-gelinta himilada cusub iyo helid la’aanta halbeeg sugan oo lagu jaado dejinta shuruucyada ay doonayso inay ku meel-mariso ahdaafteeda. Taas waxay kuusoo baxaysaa marka aad dib u eegto halka xukuumadda Mudane Kheyre ay wax ...
Zakariya August 22, 2017	Leave a comment 382 Views
Muqdisho (Himilonews) – Dowladda Kenya ayaa ku celcelisay in mamnuucista bacaha balaastiga uu meel-maray, marka la gaaro 28-ka bisha August-na uu dhaqan-gal noqon doono. Xog-hayaha Wasaaradda Deegaanka, Biyaha iyo Ilaha Dabiiciga ah, prof. Judy Wakhungu ayaa sheegay in isticmaalka, sancada iyo soo dhoofsiga bacaha balaastiga ay noqon doonto danbi iyo sharci-darro kadib taariikhda dhaqan-galka. Marka loo eego Wakhungu, qof kasta ...
Qeybtii 2aad: Wax Ka Baro Dhurwaaga “Waraabaha”
Australia: Markuu geel-jiraheennu macalin noqdo
Mohamed Ali oo loogu magac-darayo garoon diyaaradeed.